7Converter | Umgaqo-Nkqubo Wabucala
Ukwenza ushishino ngathi 7converter.com ("Inkampani", "thina", "thina", "yethu"), siyazi ukuba zethu abasebenzisi care malunga njani inkcazelo yakho yobuqu isetyenziselwa kwaye ezisasaziweyo. Singathatha yakho yangasese seriously. Nceda funda oku kulandelayo uvela zethu umgaqo-Nkqubo wabucala.
Yi-makhaya okanye usebenzisa Iinkonzo ngayo nayiphi na indlela, kufuneka uqinisekise ukuba uyavuma imigaqo echazwe kulo mgaqo-Nkqubo wabucala, kwaye ngaloo ndlela uyavuma ukuba siza ukuqokelela, sebenzisa, inkqubo ukugqithisa ulwazi lwakho njengoko kuchaziwe kwi-xwebhu.
I. YANGASESE IMIGAQO
Lo mgaqo-Nkqubo wabucala ubonisa zilandelayo ezintathu imigaqo ukuba sizama adhere to xa kubonelelwa wena kunye zethu Inkonzo:
Siza kuphela ukuqokelela ulwazi ukuba uyakusinceda ukuphucula Iinkonzo zethu;
Kufuneka unike, kwaye thina kuphela ukuqokelela, ulwazi ukuba unako ubuqu ukuchonga kuwe ("Inkcazelo yobuqu") ukuze ukubonelela Iinkonzo;
Zethu umgaqo-nkqubo wabucala iya kuba sicace kwaye ngaphaya kuwe.
II. YINTONI LE UMGAQO-NKQUBO WABUCALA?
Lo mgaqo-Nkqubo wabucala sijongana zethu uphatho lwe ulwazi thina ukuqokelela xa ngaba ukufikelela okanye usebenzise Iinkonzo zethu. Lo mgaqo-nkqubo akusebenzi ukuba iinkampani ukuba asikholwa owakhe okanye ulawulo (kuquka, kodwa kunganyinwanga-aplikeshini zabanye abantu beziqulatho ukusuka abo nibe nokufumana isiqulatho Ngeenkonzo), okanye abantu ukuze sibe musa hire okanye ukulawula.
I Company akusebenzi knowingly ukuqokelela okanye isicelo Inkcazelo yobuqu ukusuka abantu abangaphantsi 13, kwaye akavumeli enjalo abantu ukuze ubhalise. Ukuba ungaphantsi kweminyaka 13, musa umzamo bhalisa kwi-Website kwaye musa ukuthumela kuthi na ulwazi malunga ngokwakho, kuquka igama lakho, idilesi, inombolo yefowuni, okanye idilesi ye-imeyili. Akukho namnye abangaphantsi 13 usenokuxela nayiphi na inkcazelo yobuqu ukuba Inkampani okanye kwi-Site. Kwimeko apho ukuba sifunda ukuba sino yesebe eqokelelweyo inkcazelo yobuqu ukusuka umntwana abangaphantsi 13 ngaphandle besomeleza kwemvume yabazali, siza cima olu lwazi msinyane kangangoko kunokwenzeka. Ukuba ukholelwa ukuba sibe kwamkela ulwazi ukusuka okanye malunga umntwana abangaphantsi 13, nceda uqhagamshelane nathi ngalo [email protected]
III. YINTONI ULWAZI INGABA NGAYO UKUQOKELELA?7converter.com?
Ulwazi thina ukuqokelela unako idla zahlukaniswe kwi zimbini iindidi:
1) i-data malunga njani umsebenzisi usebenzisa Iinkonzo zethu;
2) aggregate data malunga isiqulatho ukuba umsebenzisi interacts kunye.
Sibe sebenzisa olu lwazi ukuze personalize ukuphucula iinkonzo zethu, ekuzalisekiseni yakho izicelo kuba ezithile iimveliso neenkonzo, kunye nokuchaza indlela usebenzisa Iinkonzo. Sibe share olu lwazi kunye amahlakani ethu ukuze nabo kanjalo unako sikunika i-ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka amava, kodwa thina zange disclose ulwazi ukuba iqabane lakho ngenye indlela ukuba identifies wena ubuqu. Nantsi eminye imizekelo i-data thina ukuqokelela xa usebenzisa Iinkonzo zethu:
Nanini na xa kufuneka ezisebenza nge iwebsite yethu, thina ngokuzenzekelayo kufumana kwaye ubungqina ulwazi lwethu umncedisi hluleka ukusuka yakho zincwadi, kuquka idilesi yakho ye-IP, cookie ulwazi, kwaye iphepha oyicelileyo. "Cookies"ingaba identifiers ukuze sibe uthumelo kwikhompyutha yakho okanye mobile icebo ukuze vumela kuthi aqonde yakho okanye isixhobo kwaye sixelele njani xa Iinkonzo kuhanjelwa njani abantu abaninzi. Ungakwazi ukutshintsha yakho zincwadi okanye imimiselo yesixhobo ukunqanda okanye thintela ukwamkelwa cookies yi computer yakho okanye isixhobo, kodwa oku kunokuba kuthintela kwenu ukususela usebenzisa abanye bethu imisebenzi. Sibe sebenzisa Google Analytics ukuya kuqokelela non-inkcazelo yobuqu. Kwiindawo ezinjalo iimeko, ungaya ukhetho ukukhubaza ezithile imisebenzi njengoko kuchaziwe apha ngezantsi.
Google Analytics - Le yi-web analytics ezinikezelwa lisebe Google, Inc. ("Google"). Google Analytics isebenzisa i cookies ukunceda kwiwebhusayithi nokuchaza indlela abasebenzisi sebenzisa Kwiwebhusayithi Izicelo. I-non-inkcazelo yobuqu generated yi-cookie malunga nokusebenzisa site uza kusasazwa waza ezigcinwe yi-Google kwi iiseva ze-e-United States of America ("USA"). Google uza sebenzisa olu lwazi ukuhlola nokusebenzisa site, ukuqokelela iingxelo kwi-site umsebenzi kuba iinjongo zethu, ukuhlola kwaye anike ezinye iinkonzo enxulumene site umsebenzi-Intanethi sebenzisa. Google ayisayi associate idilesi yakho ye-IP kunye nayiphi na enye i-data ezigcinwe yi-Google. Uyakwazi khubaza cookies yakho zincwadi, kodwa nceda qaphela ukuba ukuba wenza oku, awuyi kukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi ye-site. Ngokusebenzisa le ndawo,ufuna imvume ukuba siqwalaselwe ka-data malunga kuwe nge-Google ngendlela kwaye ngeenjongo echazwe ngasentla. Kuba abanye browsers, uyakwazi kuthintela Google ukusuka ukuqokelela ulwazi (kubandakanywa idilesi yakho ye-IP) usebenzisa i cookies kwaye iyaqhubekeka olu lwazi ngokukhuphela oku zincwadi efakiweyo kwaye ufaka ngayo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Nanini na xa kufuneka ezisebenza kunye 7converter.com, thina ngokuzenzekelayo kufumana kwaye ukubhala ulwazi zethu umncedisi hluleka, umzekelo:
Ukuba usebenzisa zethu software kwaye ungqubano, i-ungqubano ingxelo ithunyelwe zethu umncedisi babe ziqulathe eminye ulwazi malunga yokusebenza usebenzisa.
Ukuba uyakwazi ukulayisha ezansti isiqulatho usebenzisa zethu desktop software, sigcina ikopi ye khompyutha yakho ukuze ixesha elizayo kufuneka ukunxulumana yefowuni yakho, akunyanzelekanga ukhuphele ke kwakhona.
Ukuba usinike igama lakho kwaye idilesi ye-imeyili, siza sebenzisa olu lwazi ukunxibelelana nawe malunga zethu iinkonzo neemveliso. Nibe opt ngaphandle enjalo communications nangaliphi na ixesha ngokufowunela zikhuphe kwisibophelelo ukusuka kwiwebhusayithi yethu ethi okanye ngokuqhagamshelana kuthi kusetyenziswa enye iindlela ezidweliswe ekupheleni lo mgaqo-nkqubo.
I-data yesebe eqokelelweyo yi-us ithumele yenkampani iiseva kwi-Russia kwi generalized ifomu kwaye yongezelela kwinkqubo yethu kuba uhlalutyo. Iinkonzo zethu musa ukuqokelela olu lwazi lulandelayo:
Yefowuni yakho inani
Abahlobo bakho ' umnxeba amanani
Yakho cat ke inombolo yefowuni
Nasiphi na isiqulatho sakho imiyalezo ethunyelwe okanye wafumana
Yakho umculo, iifoto okanye iividiyo
Isiqulatho ukuba ufuna layisha phezulu ngokusebenzisa inkampani
Asikholwa injongo yethu uluhlu onke amaxabiso enobudlelane ukuba singenza. Lo mgaqo-Nkqubo wabucala ngu intended ufuna uncedo ukuze uqonde lethu jikelele imithetho. Lo mgaqo-nkqubo sele isiqinisekiso, ukuze ulwazi lwakho ayinakuze ibe disclosed, ngaphandle kokuba njengoko kuchaziwe ngasentla. Umzekelo, abantu amaqela babe illegally ujongano okanye afumane ukufikelela kulwazi ezisasaziweyo okanye equlethwe kwi-site, ubugcisa babe malfunction okanye hayi umsebenzi njengoko kulindeleke, okanye umntu unakho ukufikelela, gadalala, okanye misuse ulwazi nangona hayi ekubeni imvume. Xa thina sebenzisa into siya kuqwalaselwa ukuba abe urhwebo amanyathelo afanelekileyo ukuba ukukhusela yakho yangasese, oku akuthethi, kwaye kufuneka na ukulindela ukuba, ukuba oku kuthetha ukuba ulwazi lwakho okanye uthungelwano iya kuhlala ziyimfihlo okanye ezikhuselweyo.
Ngokubanzi, siza store ulwazi kuba njengoko ixesha elide njengoko kufunwa, permitted, okanye njengoko ixesha elide, njengokuba nathi deem oko kuluncedo. Ukuba uyeke ukusebenzisa iwebhusayithi okanye imvume yakho ukuze usebenzise i-website ngu kugqityiwe, sibe kuqhubekeka ukusebenzisa kwaye disclose inkcazelo yakho yobuqu ngokungqinelana mgaqo-Nkqubo wabucala, nto leyo ulungiswa kumaxesha ngamaxesha. Asikholwa aza kuthatha inxaxheba na yokugcina zomgaqo-phantsi le-Nkqubo wabucala. Sibe alahle ulwazi ngokwengqiqo yethu eyodwa ngaphandle phambi kokuba isaziso ngokungqinelana umthetho osebenzayo.
Ingaba thina disclose ulwazi thina ukuqokelela ngaphandle kwamaqela?
Ukongeza kwi-enobudlelane kuchaziwe kwi-xwebhu, sibe disclose ulwazi lwakho xa sikholwa ukuba yayo upapasho ithobela umthetho, prescribes imigaqo yethu site, okanye kuyakhusela zethu, abanye abantu ke, amalungelo, ipropati, okanye ukhuseleko. Ngokungqinelana umthetho osebenzayo, thina uvimba ekunene, voluntarily okanye involuntarily, ukwenza nawuphi na ezisemthethweni ukusebenzisa Ulwazi Lobuqu kwihlabathi liphela, kuquka, ngaphandle kwemida, ku: qokelela, sebenzisa, ufikelelo (okanye prohibit access), inkqubo, ukwenza, disclose, ukubonisa, exchange, siphendule lawsuits okanye ngenye indlela ukusebenzisa amalungelo ethu phantsi umthetho osebenzayo, ukugqithisa, store, bathengise, kukrazulwa, gcina, dibanisa, ukuphanda, ukuqinisekisa, nindivavanye, enforce, kwaye enforce amalungelo ethu phantsi umthetho osebenzayo., cima kwaye ngenye indlela ukukhombisa u-buqu kwaye ulwazi engelilo Inkcazelo yobuqu.
V. DISCLAIMER MALUNGA NOKHUSELEKO ANESITHATHU AMAQELA
ASIQINISEKISI UKUBA UKHUSELEKO KA-INKCAZELO YOBUQU OKANYE ENYE INGCACISO NGAYO NAYIPHI NA IFOMU. Siya kusebenza ezahlukeneyo ukhuseleko amanyathelo ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho buqu. Inkcazelo yakho yobuqu ngu ukugcinwa ngasemva ekhuselekileyo networks kwaye kuphela efikelelekayo ukuya limited inani abantu abathe ezikhethekileyo ukufikelela amalungelo enjalo iindlela kwaye ingaba kufuneka igcine ukugcina iimfihlo ka-ulwazi. Xa-odolo okanye ufikelelo lwakho buqu, siphakamise usebenzisa ekhuselekileyo umncedisi. Zonke ziyimfihlo ulwazi kufuneka anike ngu ezisasaziweyo phezu Ekhuselekileyo Isokhethi Umaleko (SSL) iteknoloji kwaye ke ofihliweyo kwi zethu isiseko sedata sokufikelela kuphela njengoko kuchaziwe ngasentla.
Kwi-i-umzamo sikunika nokwandisa ixabiso, sibe ziquka-aplikeshini zabanye abantu amakhonkco zethu site. Ezi websites kuba ezahlukeneyo kwaye elizimeleyo zabucala. Ke ngoko, asingawo elijongene isiqulatho kwaye imisebenzi ezi zephondo. Nangona kunjalo, sizimisele ukukhusela i-ubuntu bethu site kwaye wamkelekile nayiphi na ingxelo malunga ezi okunxulumene zephondo (kuquka ukuba ethile ikhonkco kubancedisi).
VI. UZA TYELELA IWEBSITE YETHU ngaphandle i-Russia?
Ukuba ngaba uye kwiwebhusayithi yethu ethi okanye ukuthenga iimveliso ngaphandle Us okanye ngenye indlela qhagamshelana nathi evela ngaphandle i-Russia, nceda lumkela ukuba inkcazelo yakho yobuqu babe kusasazwa, ukugcinwa okanye ekusetyenzwe kwi-Russia, apho zethu iiseva kwaye zethu central umbindi zibekwe khona. Sedata usesinye mahlanu. I-Data ukukhuselwa, imithetho kunye neminye imithetho kwi-Russia nakwamanye amazwe alinakukhuselwa njengoko ngenkxaso njengoko kulo ilizwe lakho. Ngokusebenzisa zethu site okanye bethenga iimveliso zethu, uyaqonda ukuba inkcazelo yakho inokuba sithunyelwe zethu kumaziko kwaye wesithathu amaqela abo sifuna ukwabelana ngayo, njengoko kuchaziwe kulo mgaqo-Nkqubo wabucala.
VII. IINGUQU MGAQO-NKQUBO WABUCALA
Sibe ukwenza utshintsho kwesi umgaqo-Nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha. Ukusebenzisa ulwazi thina ukuqokelela ngoku ilawulwa ngumthetho umgaqo-Nkqubo kwi-ukusebenza ngexesha ukusetyenziswa ezifana ulwazi. Ukuba senza utshintsho ndlela siya kusebenzisa Inkcazelo yakho yobuqu, siyakwazisa nge-bafakwe i-ad kwi kwiwebhusayithi yethu ethi okanye ngokuthumela ufuna i-imeyili apha. Kumele uthobele naluphi na utshintsho umgaqo-Nkqubo wabucala xa usebenzisa Iinkonzo emva tshintsho zithe kuqala ipapashwe.
VIII. UNGAKWAZI NJANI KUNGASEBENZI, CIMA, OKANYE UKUTSHINTSHA LE NGCACISO KUTHI?
Ukutshintsha ye-imeyile yakho umrhumo, nceda usazise nokwazi ngokutshintsha-akhawunti yakho izicwangciso okanye ngokuthumela nathi i-email ku idilesi ngezantsi. Nceda uqaphele ukuba ngenxa imveliso schedules nge-imeyili, unga kufumana naliphi na email ukuba ingaba sele imveliso. Ukususa zonke yakho ekwi-intanethi-akhawunti ulwazi ukusuka zethu database, nceda uqhagamshelane nathi ngqo ugqitha i-imeyili apha:[email protected] Ngokungqinelana nomgaqo-kufanelekileyo imithetho, nceda qaphela ukuba sibe store ulwazi malunga oyedwa iintengiso intengiselwano kwinkonzo ukuba intengiselwano kwaye ukugcina iirekhodi.
IX. IMVUME UKUBA I-ZOMBANE ISAZISO UKUBA KUYINTO UKHUSELEKO BREACH
Ukuba sisebenzisa kufuneka unike isaziso unauthorized ukufikelela okanye ezinye intrusion kwi ezithile iindlela zokhuseleko, uyavuma ukuba thina (okanye babe) meyi kwenza ke njengoko kuyimfuneko (okanye voluntarily) nge-yokuposa isaziso ngomhla kwiwebhusayithi yethu ethi okanye ngokuthumela i-isaziso na idilesi ye-imeyili sino kuwe, ngexesha lethu (okanye zabo) okulungileyo ukholo yedwa. Uyavuma ukuba isaziso ukuba uza uqwalaselwe isaziso ukuba abanye abantu ngomhla zabo egameni uvumelekile ukuba isithethi, kwaye uyavuma ukuba uthumelo isaziso kubo.
X. IMIBUZO OKANYE YETHUTYANA
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye yethutyana malunga zethu umgaqo-nkqubo wabucala, nceda thumela nathi i-wonke umyalezo kwi [email protected]